Qabsoo Bilisumaa Oromoo bara 1991 duraa fi sana boodaa – Welcome to bilisummaa
Qabsoon Bilisummaa Oromoo (QBOn) kan eegale, biyyi teenya Oromiyaan Minilikiin weeraramtee; erga uummatni ykn sabni keenya gabrummaa Habashaa jalatti kufee kaasee akka ta’e seenaatu mirkaneessa. Barreeffama kana keessati, QBO bara 1991 duraa yoon jedhu garuu duubatti deebi’ee jalqabarraa kaasee ilaaluuf otuu hin taane, caalaatti kan ani itti xiyyeeffadhu, QBO Adda Bilisummaa Oromootiin gaggeeffamaa jiru yoo ta’u, yeroon ani bakkee lamatti baasee ilaalus erga ABOn ijaaramee kaasee hanga bara 1991 fi sana boodaa ti. Ijoon barreeffama kanaas sochii ABO fi dammaqinsa uummata keenyaa walbira qabee ilaaluu ta’a. Dammaqinsa yoon jedhu ammoo, guddina fi bilchina Oromummaa hubachuudhaan; sabboonummaan Oromoo sadarkaa maaliirra akka ture fi har’a irra jiru ibsuufi.
Addi Bilsummaa Oromoo (ABOn) kan ijaarame haala baay’ee ulfaataa ture keessatti akka ta’e, bu’ureessitoota fi seenaatu ragaa ta’u. ABOn haala walxaxaa ta’e keessatti uumamullee; qabsoo hadhaawaa karaa lamaa gaggeessuu dhaan, bara 1991 jijjiiramni guddaan akka dhufu taasise. Karaa lamaan kana keessaa inni tokko, qabsoo fi falmii diina waliin godhaa ture yoo ta’u; inni biraa ammoo, uummata keenya dammaqsuu fi Oromummaa guddisuuf ture. Haa ta’u malee, tokkummaan qabsaa’ota Oromoo yeroo sanaa akka har’aa laafaa waan hin turiniif, rakkoolee gara garaan isa muudatan irra aanuudhaan, ABOn injifatnoo hamma kana hin jedhamne galmeessuu danda’e. Garaagarummaan ilaalcha siyaasaa qabsaa’ota jidduu turullee; akka har’aa cimaa waan hin turiniif, humni mooraa QBO cimaa ture jechuu dha. Yeroon sun deebi’ee dhufinaa laata??
Previous Qabsoo bilisummaa ti moo qabsoo taayitaatu godhamaa jiraa?
Next Ayyaanni Irreessaa (Irreechaa) mallattoo Oromummaa waan ta’eef, bakkee hundattuu bal’inaan..